Koonfurta Talyaaniga oo ay buuxdhaafiyeen Qaxooti ka soo safraya Liibiya | Allsomali24.com	Maanta oo ah
Koonfurta Talyaaniga oo ay buuxdhaafiyeen Qaxooti ka soo safraya Liibiya
Tahriibayaasha gaaray koonfurta Talyaaniga
Malta (Allsomali24): Maalmahan dambe waxa si isdaba joog ah u soo gaaraya Xeebaha dalalka Telyaaniga iyo jasiirada maalta dooman sida dad muhaajiriin qaxooti ah, kuwasoo ka soo safraya xeebaha dalalka liibiya.
Doomaha sida dadkan ayaa waxaa ay si dirqi ah ay ku sugaaran jasiirada malta iyo dalka talyaniga.
Xiliyadan yaa waxaa aytahay bada lugu soo safraya ee looyaqan mina tareliyanka bad aad uhalis ah aydoona ay hada bilamatay xiligii samarka qaboobaha ee bada baraf fadhiaya ay noqota muhajiriinta qaxotiga kusoosafrayaan in ay naftooda kuwayaan ayna dhicikarto.
Bada udhaxeyasa jasiirada, Malta ,Italia, Tunisia, ayaa waxaa aytahay gob saadax geysood ah oona ay marakibta waa weyn ay kacabsadan xiliyada qabowha.
Muhajirinta qaxotiga ah ayaa waxaa ay kusofrayaan doman kasmeysan alwaax iyo kuwa ayagana kasameysan, buufin , oo na ah doman luugu talagalay in an lugu tagin meelah fuk fuk ee halista ahi.
Qaxootigan ayaa waxaa kusooracayaan tiro gareysa 70. Qof ama kun qof 50. Duumankasi ayaa waxaa ay mitirkoda aygarayaan 11mitir halka balaceduna uuyahay mid aad uliita.
Qaxootiga soo gaaraya konfurta Telyaaniga ayaa u badan dad ka soo jeeda wadamada SOOMALIA , ELLATHARIYA ,ETHOPIAN IYO, MALLI.
Muhaajiriinta sharci darada ku socdalaya ee ka soo jeeda wadamadasi ayaa waxaa ay badan yihiin kuwo ka soo cararay rabshadaha kajirara dalkooda. Iyo kuwa loo adeksanyo cidan in ay noqdaan.
Qaxootiga soomalida ah ee soo gaaray Telyaaniga iyo Malta ayaa ayaa dib u dejin iyo qaabilaad loo sameeyay inkasta oo hadana meesha ay ku jirto labadan dowladeed Italy iyo Malta inay la daala dhacayaan qaxootigii hore ee gudaha wadanka joogay kuwasoo ay ku fashilmeen inay u sameyaan dib u dejin iyo soo dhoweyn wanaagsan.
Qaxotiga kunol dalka taliyaniga ay ku jiraan xalada aad u qatar ah oo aysan helin kabigii qaxotinimo lugu dar yelijiray inkasto safirka soomaliya ufadhi dalka talyaniga loga faidhiya in u radiyo xaquuda dadka soomalida ay ku leyihiin wadanka talyaniga ayna mesha kabaxaday wadashqentii labadowladod .
Bashiir Jiidaal Barrow (LLPP)
Koonfurta Talyaaniga (Shishiiliya)
Share this:EmailPrint	Short URL: http://allsomali24.com/?p=1739
Posted by Allsomali24 on Nov 14 2012. Filed under Dhacdooyinka, Somali News.